2020 | Radio Himilo
Home / Yesterday at 3:49 pm
Yearly Archives: Yesterday at 3:49 pm
Sadia Nour Yesterday at 3:49 pm
Himilo – Covid-19, oo galaaftay nolosha hal milyan oo ruux asiibayna 38.6-Milyan oo kale wali looma helin wax tallaal ah amaba dawo lagula tacaalo. Cilmibaaris cusub oo ay sameysay waaxda caafimaadka ee iskuulka Columbia Mailman School, ayaa lagaga digay cawaaqibka ...
Sadia Nour Yesterday at 2:57 pm
Himilo – Olole saldhigiisu ahaa baraha bulshada ayaa suuragaliyay in dib loo dajiyo lana mideeyo mukulaalaha mataanaha ah ee la rumeysan yahay inay ugu da’da wayn yihiin UK. Nikita iyo Leon oo 21-jir ah uma suuragalin noloosha oo dhan in ...
Frank Lampard: Mendy waa dookha koowaad ee kooxda xilligan
Sadia Nour Yesterday at 2:34 pm
Himilo – Xiddigga reer Senegal ayaa qanciyay hoggaamiyaha Blues markii uu si wanaagsan uga soo muuqday kulankii kooxdiisa wajahday Los Nervionenses. Tababaraha Chelsea, Frank Lampard ayaa ciyaarsiiyay Edouard Mendy iyada oo kooxdiisa ay barabro 0-0 la gashay Sevilla Talaadadii ciyaar ...
Barcelona oo xaqiijisay in afar ciyaaryahan ay heshiis kordhin sameynayaan
Sadia Nour Yesterday at 2:29 pm
Himilo – Qaar kamid ah ciyaartoyda safka koowaad ee FC Barcelona ayaa sameynaya hehsiis kordhin ay la galayaan naadiga. Xiddigahan ayaa kala ah Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet iyo Frenkie de Jong. Heshiiskan waxa uu imaanayaa kaddib markii ...
Haweeneey cunugeeda ku dhex illowday Tareen
Sadia Nour Yesterday at 2:22 pm
Himilo – Waxey ahayd xilli dadka oo idil u deg-degayaan shaqo amaba Waxbarasho, markii mid ka mid ah dadkii ku safray Tareen koofur-bari london ay si kadis ah uga degatay gaariga kana tagtay cunugeedii. Haweeneeyda, cunugeeda iyo rakaab kale ayaa ...
Himilo – Tobanaan ruux ayaa si kas ah loogu tallaali doonaa feyruska corona, si qeyb uga noqdaan dadaalka lagu baadi goobayo tallaalka Covid-19. UK ayaa markii ugu horreeysay ogolaaneysa tijaabadan, kadib markii ay heshiis la gaartay shirkadda gacanta ku heysta ...
Himilo – Hogaamiyaha kasmada sharciga ee jaamacadda South Carolina, ayaa raali-galin ka bixiyay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda oo uu ku faafiyay baraha bulshada. William Hubbard, ayaa sheegay inay farxad qaatay markii uu arkay in 80% ardayda ay ku guuleysteen ...
Himilo – Caday amaba rumey dhirirkiisu yahay 19cm ayaa laga soo saaray caloosha bukaan xanuunsanaa 24-saac. 39-jirkaan ayaa doonay inuu nadiifiyo qeybta danbe ee carabkiisa markii uu si kadis ah ugu fakaday cadaydii uu isticmaalayay. Dhul gaaraya 100km ayuu u ...
Real Madrid oo Barcelona kaga horreysa tartanka Kylian Mbappe
Himilo – Mustaqbalka weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe waxa uu ahaa mowduudc taagan muddooyinkii lasoo dhaafay, iyadoo ay jireen hadallo badan oo ku aadan in laacibkan xagaaga soo aadan uu naadiga ka tegayo. Kylian Mbappé ayaa kulankiisii ugu horreeyay ...
Miralem Pjanic oo markiisii ugu horreysay kusoo bilaabanaya safka Barcelona
Himilo – Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa magacaabay safka kooxdiisa tartanka UEFA Champions League ciyaarta ay wajahayaan Ferencvaros, xilli laacibka Miralem Pjanic uu markiisii ugu horreysay kasoo muuqan doona kooxda reer Catalan sida ay werisay barcablaugranes. Barcelona ayaa Pjanić ...